'Call of Aduty: Vanguard Zombies' Trailer dia manohy ny lova tsy maty - iHorror
Home Games 'Call of Aduty: Vanguard Zombies' Trailer dia manohy ny lova tsy maty
'Call of Aduty: Vanguard Zombies' Trailer dia manohy ny lova tsy maty
by Trey Hilburn III Oktobra 15, 2021
by Trey Hilburn III Oktobra 15, 2021 557 hevitra
Call of Duty Zombies dia tsy miova ary zavatra iray azontsika ianteherana saika isan-taona manodidina ny fialantsasatra. Tsy maninona isika raha mieritreritra manome be dia be antsika hatao mandritra ny fety Thanksgiving sy Xmas. Tamin'ny taon-dasa Call of Duty Black Ops: Zombies nitondra ekipa misy vavahady efatra tsy maty sy multidimensional an'arivony ary nitondra fitaovam-piadiana taonina maro. Fipoahana io! Zombies koa dia nanisy maody vaovao maro, anisan'izany ny lalao misokatra, lalao miorina amin'ny iraka. Io no Zombies tsara indrindra nandritra ny fotoana ela.
Call of Duty: Vanguard efa ho amin'ny 5 Novambra izao ary miaraka amin'ny famoahana maty bebe kokoa! Antson'ny adidy: Zombie Vanguard hanohy ny tantaram-pitiavan'i Dark Aether avy amin'ny Call of Adidy Mainty Ady mangatsiaka ary ento any amin'ny ambaratonga vaovao atosiky ny fampisehoana gen manaraka.
Toy izao ny fanaparitahana ofisialy ny developer:
Nanomboka tamin'ny fisokafan'ny vavahady Dark Aether tao amin'ny Projekt Endstation izany rehetra izany. Taorian'ilay fanandramana nazia lasa ratsy be ary nanindrona lavaka iray nanarona ilay voaly dimensional dia nandeha lavitra be ny vokany. Mihoatra noho ny efa fantatsika.
Ny mpiasan'ny tafika manokanay dia tafahitsoka ao am-pasana feno lanezy ao Stalingrad, tsy misy backup ary tsy misy fitaovam-pifandraisana, tazomin'ny maizina maizina an'i Kortifex the Deathless. Kortifex dia iray amin'ireo orinasa Dark Aether dimy mifamatotra amin'ny olona an-tany amin'ny alàlan'ny artefact hafa eto an-tany. Ny efatra hafa - Saraxis the Shadow, Norticus the Conqueror, Inviktor the Destroyer, ary Bellekar the Warlock - dia mikomy amin'i Kortifex.
Tsy afaka miandry handavaka ireo famonoana olona tsy maty isika rehefa Call of Duty: Vanguard latsaka ny 5 nov. Azo alaina amin'ny Xbox Series X sy Series S, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Microsoft Windows.